အရွယ်တင်စေတဲ့ ပစ္စည်း ၇ မျိုး - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » အရေပြား အလှအပရေးရာ » အရွယ်တင်စေတဲ့ ပစ္စည်း ၇ မျိုး
အရွယ်တင်စေတဲ့ ပစ္စည်း ၇ မျိုး
အိုမင်းခြင်းဆိုတာ လူတိုင်းတွေ့ကြုံရမယ့်သဘာဝတရားပါ။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရောဂါမဟုတ်ပေမယ့် ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုနဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကို သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အချိန်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်သာမက အိုမင်းခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ သကြားအလွန်အမင်းသုံးစွဲခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အိုမင်းခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်မယ့် ဓာတ်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
ဗီတာမင်ဘီကို skin careတွေမှာ အများအပြားအသုံးပြုပါတယ်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို အကာအကွယ်ပေးပြီး အစားအစာကနေ စွမ်းအင်ကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် ခန္တာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ အသားအရည်အတွက် ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့အသားအရည်ကိုလည်း ကုသပေးပါတယ်။ NIA အရ ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး အသားအရည်ကိုတင်းရင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုပါဝင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
ဒီဓာတ်ဟာအိုမင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ဗီတာမင်အေ၊ စီနဲ့ အီး၊ glytathione၊ ဆယ်လီနီယမ်၊ လက်ဖက်စိမ်းအနှစ်၊ ပဲပိစပ်အနှစ်၊ စပျစ်စေ့အနှစ်၊ သလဲသီးအနှစ်၊ superoxide၊ dismutase၊btecarotene ဓာတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ skin careတွေဟာ စိတ်ဖိအားကျဆင်းစေပြီး အရေပြားနီမြန်းခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ အသားအရည်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး နေ့စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့သက်ရောက်မှုတွေကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
၃။ အကူအင်ဇိုင်းဓာတ် Q.10
ဒါကတော့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့အသားအရည်ကိုဖန်တီးရာမှာ အလွန်အစွမ်းထက်ပြီး အကျိုးအရမ်းရှိပါတယ်။ အသားအရည်အတွက် အကူအင်ဇိုင်းQ.10ရဲ့ အထောက်အပံ့ဟာ တစ်ရှုးရဲ့collagenကို အရေပြားထဲထိန်းသိမ်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။
သူကတော့ ပရိုတင်းဓာတ်ကိုတည်ဆောက်ရာမှာပါဝင်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်ပြီး collagenပမာဏကို တိုးပွားလာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာအိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲ မပါမဖြစ်ပါဝင်လာပြီး ကျန်းမာတဲ့အရေပြားအသစ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
Omega3နဲ့ Fatty acidပါဝင်မှုမြင့်မားတာကြောင့် ငါးကြီးဆီဟာ နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်သာမက ကြွက်သားကျန်းမာရေးအတွက်ပါ ကောင်းပါတယ်။ အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ အရိုးအဆစ်နာကျင်ခြင်း၊ နာတာရှည်အရေပြားရောဂါကိုလည်းကောင်း ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငါးကြီးဆီဟာ လူကြီးတွေမှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချပေးနိုင်ပြီး ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ငှက်သိုက်မှာ ဓာတ်ပြုစွမ်းအားရှိတဲ့အဆီတွေမြင့်မားစွာ ပါဝင်တာကြောင့် oxidizationဖြစ်ပြီး ဆဲလ်တွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နှလုံးအားကောင်းစေပြီး ကင်ဆာရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သတ္တုဓာတ်နဲ့တခြားphytochemicalတွေဟာ ငယ်ရွယ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်မှာပါ။
သွေးကနေတစ်ဆင့်ဖြတ်သွားတဲ့ အလင်းတွေကနေ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေကိုထုတ်ပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ဆဲလ်တွေကို ရှာတွေ့ရင် ပိုများတဲ့ ပရိုတင်းတွေ အင်ဇိုင်းတွေကိုထုတ်ပေးဖို့ ဆဲလ်တွေကိုညွှန်ကြားပါတယ်။
Testosteroneဆိုတာ အဖိုဟော်မုန်းဖြစ်ပြီး အရိုးသိပ်သည်းမှု၊ အဆီဖြန့်ဝေခြင်းနဲ့ ကြွက်သားတွေသန်မာအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ အမျိုးသားတွေသာမက အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။
အိုမင်းလာတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ထင်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီး အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့ကုသမှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ သဘာဝကုထုံး၊ ဆေးဝါး သို့မဟုတ် ကျန်းမာတဲ့အားဖြည့်စာနဲ့နေထိုင်တဲ့ပုံစံတွေပါပဲ။
လှပသောအသားအရေအတွက် ဗီတာမင်နဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများ
အာရှအသားအရေ နှင့် တင်းတိပ်
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးနောက် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် နည်းလမ်းများ
သင့်အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းများ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝငျဘာ 23, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝငျဘာ 23, 2017
Can We Prevent Aging? Tips from the National Institute on Aging, National Institute on Aging
https://www.nia.nih.gov/health/publication/can-we-prevent-aging. Accessed on December 23 2016
Biology of Aging, National Institute on Aging
https://www.nia.nih.gov/health/publication/biology-aging/preface. Accessed on December 23, 2016.
သင့်အရေပြား အပေါ်ယံလွှာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
အသက်ကြီး၍ ထွက်လာသော အရေပြားပေါ်မှ အစက်အကွက်များကို ဖယ်ရှားဖို့ ကူညီပေးနိုင်သည့်အစားအသောက်များ
[QUIZ] စိုပြေလှပတဲ့ အသားအရေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုအစားအစာတွေကို စားရ၊ရှောင်ရ မလဲ။
အသက်ငါးဆယ်မတိုင်မီ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာတာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ